Tsy mpanamboatra efijery LED fotsiny isika
Misy fomba fiteny sinoa taloha: mpanjifa no mpanjaka, midika izany fa ianao no sarobidy indrindra aminay. Amin'ity tranga ity dia mila mitaky fitakiana amin'ny tenantsika isika. Ny fiasanay dia tsy ny famokarana ny tontonana tarihina ihany fa koa ny fanomezana vahaolana tsara ho anao. Ohatra, nahazo ord ...
Fanaterana ny efijery LED Lebanon
Fanaterana ny efijery LED any Libanona Amin'ny volana Desambra, manatitra ny LED Displays any Libanona izahay. Ny rindrin'ny LED dia avo lenta ary manome antoka 2 taona izahay. Manana fifehezana kalitao henjana izahay: Izahay dia mizaha ny dingana rehetra amin'ny famokarana (fitsapana sy fahanterana ho an'ny Module LED - kabinetra LED na tontonana LED - LED s ...
Fanaterana ho an'ny fampisehoana LED Thailand
Fanaterana ho an'ny fampisehoana LED Thailandy Amin'ny volana Desambra, manatitra ny LED Video Walls mankany Bangkok, Thailand izahay. Ny rindrin'ny LED dia avo lenta ary manome antoka 2 taona izahay. Manana fifehezana kalitao henjana izahay: Izahay dia mizaha ny dingana rehetra amin'ny famokarana (fitsapana sy fahanterana ho an'ny Module LED - kabinetra LED na LED ...
Fanaterana ny efijery fampiratiana LED Slovenia avo lenta
Fanaterana ny efijery misy jiro LED Slovenia avo lenta Amin'ny volana novambra, manolotra ny sary mihetsika LED LED any Slovenia izahay. Ny efijery horonantsary LED dia manana kalitao avo lenta, ary manome antoka izahay mandritra ny 2 taona. Manana fifehezana kalitao henjana izahay: Izahay dia mizaha ny dingana rehetra amin'ny famokarana (fitsapana sy fahanterana ho an'ny Modul LED ...
Ny mpanjifa avy any Thailand dia nitsidika ny orinasanay ho an'ny LED Displays tamin'ny 16 Oktobra
Ny 16 Oktobra (talata) dia nitsidika ny orinasanay ny mpanjifanay avy any Thailand. Miresaka momba ny fitsidihan'ny orinasa izy ireo; ny LED Display Panels sy ny serivisinay miaraka amin'ny matihanina dia nahazo ny fanekena sy fahatokisana azy ireo. Mitondra sakafo maivana manokana any Thailandy aho, izay ampianariko ...
Ny mpanjifa avy any Chile dia nitsidika ny orinasanay ho an'ny Pantallas LED tamin'ny 26 Sept
Tamin'ny Septmerber 26th, ny mpanjifanay avy any Chile dia nitsidika ny orinasanay. Nanome fiheverana betsaka ny Pantallas LED Publicidad para Exteriores (Screens LED Advertising any ivelany) 10m * 3m sy 4m * 3m izy ireo. Mandritra ny fitsangatsanganana ataon'ny orinasa dia miresaka fanontaniana marobe momba azy ireo amin'ny antsipiriany izahay. Taorian'ny fianarana ho an'ny ...
Ny mpanjifa avy any Chile dia nitsidika ny efitranontsika (ho an'ny Pantallas de LEDs) nandritra ny 24 ka hatramin'ny 29 Mey
Nandritra ny 24 hatramin'ny 29 mey lasa teo dia nitsidika ny orinasanay ny mpanjifanay avy any Chile. Nandoa fiheverana betsaka tamin'ny Pantallas LED (LED Display Screen) 6m * 4m izy ireo. Miresaka momba ny fitsidihan'ny orinasa izy ireo; ny vokatra sy ny serivisy miaraka amin'ny matihanina dia nahazo ny fanekeny sy ny fahatokisany. An ...
Ny mpanjifanay avy any Italia dia nitsidika ny orinasanay tamin'ny 27 Jona
Ny 27 Jolay (Alarobia) dia nitsidika ny orinasanay ny mpanjifanay avy any Italia. Nasehonay ny lafiny rehetra mifandraika amin'ny efijery LED Monitors / LED anay, toy ny: ny fizotry ny famokarana ny fomba fiasan'ny LED Display amin'ny fomba hifehezana ny fomba fametrahana ny fomba fikojakojana ny fomba fandaharana - Ireo mpamokatra mandeha ho azy ...